Wararka - Dood ku saabsan tignoolajiyada kala daadinta kulaylka ee xarunta xogta
Kobaca degdega ah ee dhismaha xarunta xogta waxay keenaysaa in badan oo qalab ah qolka kombayuutarka, kaas oo bixiya jawi heerkulka iyo qaboojinta joogtada ah ee xarunta xogta. Isticmaalka korantada ee xarunta xogta ayaa si weyn u kordhin doonta, oo ay ku xigto korodhka saamiga ee nidaamka qaboojinta, nidaamka qaybinta korontada, kor u kaca iyo koronto-dhaliyaha, taas oo keeni doonta caqabado waaweyn isticmaalka tamarta xarunta xogta. Xili dalka oo dhan uu ku tashanayo ilaalinta tamarta iyo dhimista qiiqa qiiqa, hadii xarunta xogaha ay si indho la’aan ah u isticmaasho tamarta bulshada waxaa lama huraan ah inay soo jiidato indhaha dowlada iyo shacabka. Ma aha oo kaliya ma aha mid ku haboon horumarinta mustaqbalka ee xarunta xogta, laakiin sidoo kale waxay ka soo horjeedaa anshaxa bulshada. Sidaa darteed, isticmaalka tamarta ayaa noqday nuxurka ugu walaacsan ee dhismaha xarunta xogta. Si loo horumariyo xarunta xogta, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo ballaariyo miisaanka oo la kordhiyo qalabka. Tan lama yarayn karo, laakiin heerka isticmaalka qalabku wuxuu u baahan yahay in la wanaajiyo isticmaalka. Qayb kale oo weyn oo ka mid ah isticmaalka tamarta ayaa ah kulaylka kala-baxa. Isticmaalka tamarta nidaamka qaboojinta xarunta xogta ayaa ku dhawaad ​​​​saddex meelood meel ka ah isticmaalka tamarta ee xarunta xogta oo dhan. Haddii aan sameyn karno dadaal dheeri ah oo ku saabsan arrintan, saameynta tamarta-badbaadinta ee xarunta xogtu waxay noqon doontaa isla markiiba. Marka, maxay yihiin tignoolajiyada kuleylka kuleylka ee xarunta xogta iyo maxay yihiin tilmaamaha horumarinta mustaqbalka? Jawaabta waxaa laga heli doonaa maqaalkan.
Nidaamka qaboojinta hawada
Nidaamka fidinta tooska ah ee qaboojinta hawada ayaa noqda nidaamka qaboojinta hawada. Nidaamka qaboojinta hawada, kala badh wareegyada wareegga wareegga qaboojiyaha waxay ku yaalaan qaboojiyaha qolka mashiinka xogta ee xarunta, inta soo hartayna waxay ku yaalaan qaboojiyaha hawada dibadda. Kulaylka gudaha qolka mishiinka ayaa lagu tuujiyaa jawiga dibadda iyada oo loo marayo dhuumaha wareega wareega qaboojiyaha. Hawada kulul waxay u gudbisaa kulaylka gariiradda uumiga ka dibna qaboojiyaha. Qaboojiyaha heerkulkiisu sarreeyo iyo cadaadis sare ayaa loo soo diraa kompressor-ka dibadda ka dibna wuxuu u iftiimiyaa kulaylka jawiga dibadda. Waxtarka tamarta ee nidaamka qaboojinta hawadu waa mid aad u hooseeya, kulaylkana waxaa si toos ah u daadiya dabaysha. Marka loo eego dhinaca qaboojinta, isticmaalka tamarta ugu muhiimsan waxay ka timaadaa kombarada, marawaxada gudaha iyo qaboojiyaha dibadda ee hawo qaboojinta. Sababtoo ah qaabka dhexe ee cutubyada dibadda, marka dhammaan qaybaha dibadda la shido xagaaga, kulaylka maxalliga ah ayaa iska cad, taas oo yareyn doonta waxtarka qaboojiyaha oo saameynaya saameynta isticmaalka. Waxaa intaa dheer, qaylada hawada-qaboojinta qaybta dibadda ayaa saameyn weyn ku leh deegaanka ku hareeraysan, taas oo sahlan in ay saameyn ku yeelato dadka degan agagaarka. Qaboojinta dabiiciga ah lama qaadan karo, kaydinta tamartana waa mid aad u hooseeya. Inkasta oo waxtarka qaboojinta ee nidaamka qaboojinta hawadu aanu sarreyn oo isticmaalka tamarta uu weli sarreeyo, weli waa habka qaboojinta ee ugu badan ee loo isticmaalo xarunta xogta.
Nidaamka qaboojinta dareeraha
Nidaamka qaboojinta hawadu waxay leedahay faa'iidooyinkeeda lama huraanka ah. Xarumaha xogta qaarkood waxay bilaabeen inay u beddelaan qaboojinta dareeraha, iyo tan ugu caansan waa nidaamka qaboojinta biyaha. Nidaamka qaboojinta biyaha ayaa ka saaraya kulaylka iyada oo loo marayo saxanadda kulaylka, iyo qaboojiyadu waa mid deggan. munaaradda qaboojinta ee bannaanka ama qaboojiyaha engegan ayaa loo baahan yahay si loogu beddelo kondhiyaha si loogu beddelo kulaylka. Qaboojinta biyaha ayaa baajisa unugga bannaanka ee hawo qaboojisay, waxay xallisaa dhibta buuqa waxayna saameyn yar ku leedahay deegaanka. Nidaamka qaboojinta biyuhu waa mid adag, qaali ah oo adag in la ilaaliyo, laakiin waxay buuxin kartaa qaboojinta iyo tamarta tamarta ee xarumaha xogta waaweyn. Marka lagu daro qaboojinta biyaha, waxaa jira qaboojin saliid. Marka la barbardhigo qaboojinta biyaha, nidaamka qaboojinta saliidda waxay sii yareyn kartaa isticmaalka tamarta. Haddii nidaamka qaboojinta saliidda la qaato, dhibaatada boodhka ee qaboojinta hawada dhaqameedku hadda ma jirto, isticmaalka tamarta ayaa aad u hooseeya. Si ka duwan biyaha, saliiddu waa walax aan polar ahayn, taas oo aan saameyn doonin wareegga elektaroonigga ah ee isku dhafan mana dhaawici doonto qalabka gudaha ee server-ka. Si kastaba ha ahaatee, nidaamka qaboojinta dareeraha ayaa had iyo jeer ahaa onkod iyo roobka suuqa, iyo xarumo xog yar ayaa qaadan doona habkan. Sababtoo ah nidaamka qaboojinta dareeraha, ha ahaato immersion ama habab kale, waxay u baahan tahay shaandhaynta dareeraha si looga fogaado dhibaatooyinka sida ururinta wasakhaysan, wasakh badan iyo koritaanka noolaha. Nidaamyada biyaha ku saleysan, sida nidaamyada qaboojinta dareeraha leh munaaradda qaboojinta ama cabbirada uumiga, dhibaatooyinka qulqulka ayaa u baahan in lagu daweeyo ka saarista uumiga ee mugga la siiyay, waxayna u baahan yihiin in la kala saaro oo "la daadiyo", xitaa haddii daaweynta noocaas ah waxay keeni kartaa dhibaatooyin deegaanka.
Nidaamka qaboojinta uumi-baxa ama adiabatic
Farsamada qaboojinta uumi-baxa waa hab lagu qaboojiyo hawada iyadoo la isticmaalayo hoos u dhaca heerkulka. Marka biyuhu la kulmaan hawada kulul ee socota, waxay bilaabaan inuumi oo ay noqdaan gaas. Kuleylka uumi-baxa kuma habboona qaboojiyaha waxyeellada u leh deegaanka, qiimaha rakibaadda waa yar yahay, kombaresarada dhaqameed looma baahna, isticmaalka tamarta ayaa yar, waxayna leedahay faa'iidooyinka badbaadinta tamarta, ilaalinta deegaanka, dhaqaalaha iyo hagaajinta tayada hawada gudaha. . Qaboojiyaha uumi-baxa waa marawaxad weyn oo hawada kulul ku soo jiidaysa suufka biyaha qoyan. Marka biyaha suufka qoyan ay uumi baxaan, hawadu waa la qaboojiyaa oo dibadda ayaa loo riixaa. Heerkulka waxaa lagu xakameyn karaa iyadoo la hagaajinayo socodka hawada qaboojiyaha. Qaboojinta Adiabatic macnaheedu waa in habka kor u kaca adiabatic ee hawada, cadaadiska hawadu hoos u dhaco korodhka dhererka, iyo xannibaadda hawadu waxay u shaqeysaa dibadda sababtoo ah ballaarinta mugga, taasoo keentay hoos u dhaca heerkulka hawada. Hababkan qaboojinta ayaa weli ah kuwa ugu cusub xarunta xogta.
Nidaamka qaboojinta xiran
Daboolka hiitarka ee nidaamka qaboojinta ee xiran waa la xiray waxaana lagu daray taangiga ballaarinta. Inta lagu jiro shaqada, uumiga qaboojiyaha wuxuu galaa taangiga ballaarinta wuxuuna dib ugu soo noqdaa hiitarka qaboojiyaha ka dib, kaas oo ka hortagi kara xaddi badan oo uumiga luminta qaboojiyaha oo wanaajinaya heerkulka barta karkaraya ee qaboojiyaha. Nidaamka qaboojinta xiran wuxuu hubin karaa in matoorku uusan u baahnayn biyo qaboojin 1 ~ 2 sano. Isticmaalka, xidhitaanka waa in la hubiyaa si loo helo saamaynta. Qaboojiyaha ku jira taangiga balaadhinta lama buuxin karo, taasoo ka tagaysa balaadhinta. Laba sano oo la isticmaalo ka dib, sii daa oo shaandhayso, oo sii wad isticmaalka ka dib marka la hagaajiyo halabuurka iyo barta qaboojinta. Waxay ka dhigan tahay in socodka hawada oo aan ku filnayn ay fududahay inay keento kulaylka deegaanka. Qaboojinta xiran waxaa badanaa lagu daraa qaboojinta biyaha ama qaboojinta dareeraha. Nidaamka qaboojinta biyaha ayaa sidoo kale laga dhigi karaa nidaam xiran, kaas oo si fiican u baabi'in kara kulaylka iyo hagaajinta waxtarka qaboojinta.
Marka lagu daro hababka kuleylka kuleylka ee kor lagu soo bandhigay, waxaa jira habab badan oo kuleylka kuleylka ah, kuwaas oo qaarkood xitaa lagu dabaqay ficil ahaan. Tusaale ahaan, kulaylka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ayaa loo qaataa si loo dhiso xarunta xogta ee wadamada qabow ee Waqooyiga Yurub ama badda, iyo "qabow qoto dheer" waxaa loo isticmaalaa in lagu qaboojiyo qalabka ku jira xarunta xogta. Sida xarunta xogta Facebook ee Iceland, xarunta xogta Microsoft ee ku taal badda dhexdeeda. Intaa waxaa dheer, qaboojinta biyaha ma isticmaali karto biyaha caadiga ah. Biyaha badda, biyaha wasakhda ah ee gudaha iyo xitaa biyaha kulul ayaa loo isticmaali karaa in lagu kululeeyo xarunta xogta. Tusaale ahaan, Alibaba waxay isticmaashaa biyaha harada Qiandao si ay u daadiyaan kulaylka. Google waxa ay Hamina, Finland ka samaysay xarun xogeed oo biyaha badda u adeegsanaysa kulaylka. EBay waxay ka dhistay xarunteeda xogta saxaraha. Celceliska heerkulka dibadda ee xarunta xogta waa ilaa 46 darajo Celsius.
Kor ku xusan waxay soo bandhigaysaa tignoolajiyada caadiga ah ee kala-baxa kuleyliyaha xarunta xogta, qaar ka mid ah kuwaas oo wali ku jira habka horumarinta joogtada ah oo weli ah tignoolajiyada shaybaarka. Isbeddellada qaboojinta mustaqbalka ee xarumaha xogta, marka lagu daro xarumaha xisaabinta waxqabadka sare leh iyo xarumaha kale ee xogta internetka ku salaysan, xarumaha xogta intooda badani waxay u guuri doonaan meelo leh qiimo hoose iyo kharashyada korantada. Qaadashada tignoolajiyada qaboojinta ee horumarsan, hawlgalka iyo kharashka dayactirka xarumaha xogta waa la dhimi doonaa oo waxtarka tamarta waa la horumarin doonaa.